तिहारमा १७ लाख माला खपत हुने अनुमान | Krishi Dabali
गृह नर्सरी तिहारमा १७ लाख माला खपत हुने अनुमान
ललितपुर। विगतका वर्षमाभन्दा यस वर्षको तिहारमा भारतबाट ल्याइने फूलको संख्यामा कमी आउने भएको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिकरूपमा फूल खेती गर्नेको संख्या बढेको र यस वर्ष ठिक समयमा नै तिहार पर्व परेकाले आयात गरिने फूलको संख्यामा कमी आउने भएको हो । गत वर्ष भारतबाट रू. ३० लाख बराबरको ३ लाख सयपत्री फूलको माला ल्याइएको थियो ।
यस वर्षको तिहारका लागि कति फूल ल्याउने भन्ने विषय यकिन नभए पनि खपत हुने फूलको बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै फूल ल्याइने फ्लोरीकल्चर एशोसिएशनले बताएको छ । गत वर्ष १७ लाख माला खपत भएको थियो । सोमध्ये २० प्रतिशत भारतबाट ल्याइएको हो भने बाँकी स्वदेशी उत्पादन हो । तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा फूलको माला खपत हुने एशोसिएशनको अनुमान छ ।
व्यावसायिकरूपमा फूल खेती गर्नेको संख्या बढेकाले हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत स्वदेशी फूल उत्पादनमा वृद्धि हुने गरेको एशोसिएशनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । फूल उत्पादनको वृद्धिसँगै उपभोक्ताको माग पनि बढेको छ । यस वर्ष उपभोक्ताले एउटा सयपत्री मालाको मूल्य रू. ६० देखि ७० सम्म बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वदेश र विदेशमा गरी वार्षिकरूपमा रू. १ अर्ब ८५ करोडको फूलको कारोबार हुँदा तिहारमा मात्रै रू. १ करोड बराबरको फूलको कारोबार हुन्छ । तिहार आउनुभन्दा एक साता अघिबाट मात्रै आयातित फूल ल्याउन शुरु गरिन्छ ।
चाडबाड र अन्य समयमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत माला खपत भएको छ । तिहार र अन्य मौसममा गरी रू. ११ करोड बराबरको फूल वार्षिकरूपमा विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ । मुख्यगरी कात्तिकदेखि फागुनसम्म विभिन्न चाडबाड र विवाहको मौसम पर्ने हुँदा फूल बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपालमा विसं २००७ देखि शुरु भएको पुष्प व्यवसाय शहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै फस्टाउँदै गएको छ । फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा लगभग ६७५ पुष्पखेती तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ ।
अघिल्लो लेखमाराष्ट्रिय किसान आयोगको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ हस्तान्तरण
अर्को लेखमातरकारीमा लाग्ने गाँठे रोग, लक्षण र रोकथामका उपाय
लकडाउनमा हात्तीले पाएन हरियो घाँस…
गाईभैँसी किन्न गाउँ सरकारबाटै अनुदान पाएपछि किसानहरुमा खुशीयाली
अम्बा फलको खेती प्रविधि
Krishi Dabali - August 29, 2019
मत्स्य दिवस का अवसरमा फेवातालमा १० हजार माछाका भुरा छोडियो
Krishi Dabali - November 22, 2019
उन्नत जातका बाख्रापालनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम